China EEC L2e Electric Cabin Car -X2 mpanamboatra sy mpamatsy |Yunlong
Filozofian'ny Operation: Yunlong E-cars, mamelona ny fiainanao ekolojika!
Positioning: Ho an'ny fiara mandeha lavitra sy mandeha isan'andro.Izy io dia manolotra anao safidy fitateram-pitaterana miovaova izay afaka mivezivezy, manamora ny fiainanao andavanandro.
Fahaizana famatsiana:1000 units/mois
Loading:4 vondrona ho an'ny 1 * 20'GP, 10 vondrona ho an'ny 1 * 40HQ
1, bateria:60V58AH Batterie Lead-Acid, Batterie lehibe, mileage fiaretana 80km, mora mandeha.
2, motera:1500W maotera haingam-pandeha, fiara aoriana, misintona ny fitsipiky ny hafainganam-pandehan'ny fiara, ny hafainganam-pandeha ambony indrindra dia mety hahatratra 45km / h, hery matanjaka sy torsi lehibe, nanatsara ny fahombiazan'ny fiakarana.
3, rafitra frein:Ny freins kapila kodia efatra sy ny hidin'ny fiarovana dia miantoka fa tsy solafaka ny fiara.Hydraulic shock absorption tena sivana lavaka .Ny mahery setroka absorption mora mampifanaraka ny lalana samy hafa fizarana.
4, jiro LED:Ny rafitra fanaraha-maso ny hazavana feno sy ny jiro LED, misy famantarana mihodikodina, jiro frein ary fitaratra aoriana, azo antoka kokoa amin'ny dia amin'ny alina, hazavana avo, hazavana lavitra, tsara tarehy kokoa, mitsitsy angovo ary mitsitsy herinaratra.
5, dashboard:Dashboard avo lenta, hazavana malefaka ary fampisehoana mahery vaika manohitra ny fitsabahana.Mora ny mahita ny fampahalalana toy ny hafainganam-pandeha sy ny hery, miantoka ny fandrosoan'ny fiara.
6, kodiarana:Ny kodiaran'ny vacuum manify sy manitatra dia mampitombo ny friction sy ny gripa, manatsara ny fiarovana sy ny fahamarinan-toerana.
7. Fonosana plastika:Ny anatiny sy ivelany amin'ny fiara iray manontolo dia vita amin'ny plastika tsy misy fofona sy avo lenta avo lenta ABS sy pp engineering, izay fiarovana ny tontolo iainana, azo antoka ary mafy orina.
8, seza:Ny hoditra dia malefaka sy mahazo aina, ny zoro ny backrest dia Adjustable, ary ny ergonomic endrika mahatonga ny seza mahazo aina kokoa.
9, anatiny:anatiny mirentirenty, ampitaovana multimedia, 、heater sy hidin-trano afovoany, mahafeno ny filanao samihafa.
10. Varavarana sy varavarankely:Ny varavarana elektrika sy ny varavarankelin'ny fiara ary ny tafo masoandro dia mahazo aina sy mety, mampitombo ny fiarovana sy ny famehezana ny fiara.
11, fitaratra anoloana:3C Certified tempered and laminated vera · Manatsara ny vokatra hita maso sy ny fiarovana.
12, Multimedia:Fitaovana MP3 sy sary mivadika, izay mora ampiasaina kokoa sy mora ampiasaina.
13, Aluminum Wheels Hub:Fandroahana hafanana haingana, lanja maivana, hery ambony, tsy misy deformation, azo antoka kokoa.
14, Frame & Chassis:GB Standard Steel, ny ambonin'ny pickling&Photostatting sy ny harafesiny-mahatohitra fitsaboana mba hiantohana tsara ny fiara fahatsapana amin'ny fijanonana sy mafy orina.
EEC L2e Homologation Standard Teknika Specs
Fandotoana ambany indrindra (mm)
Batterie 60V/58Ah Lead-Acid
Charger fiara 60V 5A
Fanaraha-maso mandeha ho azy
Eo anoloana: 135/70-R12 aoriana: 135/70-R12
MP3 + fakan-tsary aoriana + bluetooth
Anisan'izany (Eo anoloana sy aoriana)
Mirror fijery aoriana
Aforitra, misy jiro famantarana
teo aloha: EEC L6e Electric Cabin Car-Y4
Manaraka: EEC L6e Electric Cargo Car Y2-C